Koogeek Ayaa Si Rasmi Ah U Daah Furaya Nalalka U Leh WiFi Smart Smart | Wararka IPhone
Waqtigan xaadirka ah iPhone horey ayaan u falanqeynay qaar ka mid ah wax soo saarka shirkadan waxaana dhihi karnaa inay haystaan ​​waddo cadaalad ah oo wanaagsan marka loo eego alaabooyinka la xiriira ama la jaanqaadida Apple HomeKit.
Waxay u muuqataa in qalabka ay ka soo bilaabayaan Koogeek ay ku guuleysteen dadka isticmaala iPhone, tani waxay u noqon kartaa dhowr sababood laakiin kuwa ugu muhiimsan shaki la'aan waa la xiriira qiimaha leh, tayada ay na siinayaan iyo sida fudud ee aan ugula jaanqaadi karno aaladaha Apple.
Waxay ahayd dhowr bilood tan iyo markii aan isku daynay Koogeek Smart Socket, Socket guluubka casriga ah oo noo ogolaanaya inaan abuurno guri xoogaa caqli badan qiimo macquul ah oo macquul ah. Waxaan cadeyneynaa inay jiraan qalab kale oo ka imanaya noocyo kale oo la jaan qaadaya Homekit, laakiin shaki la'aan Koogeek ayaa si weyn u sharadaysa waxaana lagu muujiyey alaabooyin cusub sida guluubkan cusub ee leh qiimahiisu waa $ 37 waxayna u oggolaaneysaa isticmaalkeeda iyada oo loo marayo iPhone-keena ama iPad-ka
Waxa ugu weyn ee ku saabsan qalabyadan guryaha ee caqliga badan ayaa ah inay runti sahlan yihiin in la dejiyo oo la rakibo. Sidoo kale kiiskan tartanka tooska ah ee guluubkan casriga ah ee Koogeek waa Philips Hue, laakiin tan ku kala duwan qiimaha ayaa ah furaha. Guluubka cusub wuxuu bixiyaa sida ku cad Koogeek ilaa 25.000 saacadood oo la isticmaalo iyo suurtagalnimada in la isu beddelo midabada iyo xoojinta illaa 500 lumens. Dhibaatada ugu weyn ee nalalka Koogeek LED, taasi uma muuqato xilligan wax iibsiga Spain, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee la helo waxaan isku dayi doonaa inaan sameyno dib u eegis ku saabsan badeecada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Koogeek wuxuu si rasmi ah u bilaabayaa guluubka loo yaqaan 'WiFi Smart LED light'